ယာကူဇာသမီးဖြစ်ရခြင်းရဲ့ သနားစရာအဖြစ်မှန် (မိဘကိုရွေးချယ်ခွင့်မရှိသော ကလေးများ…) - JAPO Japanese News
လာ 15 Nov 2021, 11:31 မနက်
ဂျပန်ရဲ့ အမှောင်လောကမှာကျင်လည်နေကြတဲ့ ယာကူဇာတွေ…
အဲ့ဒါထက် ယာကူဇာလောကဟာ အတိတ်မှာကျန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံကိုရောက်လာပါတယ်။
ရဲတွေရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့နှိပ်ကွပ်မှုကြောင့် ကျင်လည်စရာမြေကျဉ်းလာတဲ့ ယာကူဇာတွေဟာ လက်ရှိဂျပန်မှာတော့ လူပေါင်း ၂၅၉၀၀ အထိလျော့နည်းသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်။
ယာကူဇာတွေဟာ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပိုက်ဆံရှာနေကြပေမဲ့၊ ရဲတွေဟာ ယာကူဇာအမြစ်ပြတ်ဖို့ အသည်းအသန်ကြိုးစားနေတဲ့ရလဒ်ကြောင့်၊ ယာကူဇာတွေထံမှာငွေချေးခြင်းရော၊ ရောင်းဝယ်ခြင်းပါ မလုပ်နိုင်တော့ဘဲ၊ အိမ်ငှားရမ်းခြင်းကိုတောင် လုပ်ခွင့်မရှိတော့တဲ့အခြေအနေထိ မောင်းထုတ်ခံနေရပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ပဲ ယာကူဇာအများစုဟာ အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့အတွက် မူးယစ်ဆေးဝါး တစ်နည်းအားဖြင့် တရားမဝင်ဆေးဝါးတွေကိုရောင်းချဖို့ လုပ်လာပါတော့တယ်။
ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ မိဘကမူးယစ်ဆေးဝါးကိုရောင်းချခြင်းကြောင့် ဘဝကိုဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့ သမီးတွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးမှာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဆေးဝါးကနေ အတော်လေးအားပြင်းတဲ့ဆေးတွေအထိ အမျိုးမျိုးရှိပေမဲ့၊ ဂျပန်ပြည်တွင်း ၂.၁၆ သန်းသောပြည်သူတွေဟာ တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးကို သုံးစွဲဖူးတဲ့မှတ်တမ်းရှိတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
ထိုရောင်းအားဟာ တစ်နှစ်လျှင်ငွေဘီလီယံနဲ့ချီပြီး ရရှိတယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်။
ဒီအပြင် မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းတဲ့သူအများစုဟာ မူးယစ်ဆေးဝါးကို ကိုယ်တိုင်သုံးစွဲမိကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။
ပစ္စည်းအရည်အသွေးမသိဘဲ ရောင်းဖို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပြီး၊ နည်းနည်းလောက်စမ်းသုံးကြည့်မိလိုက်ရင်း ထိန်းမနိုင်တော့ဘဲ လက်လွန်ပြီး အကြီးစားအသုံးပြုသူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားကြပါတယ်။
ပထမဆုံးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ A ဆိုတဲ့မိန်းကလေး
Kanagawa စီရင်စုမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးမှောင်ခိုရောင်းချတဲ့အဖွဲ့အစည်းရှိ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ရဲ့သမီးအနေနဲ့ မွေးဖွားလာခဲ့တယ်။
မှောင်ခိုဝယ်ထားတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးကို လူတွေထံတစ်ဆင့်ပြန်လည်ရောင်းချပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူအများစုက လိင်ဆက်ဆံရာတွင်ကာမအားကောင်းစေဖို့အတွက် စတင်သုံးစွဲကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်လိုတော့ キメセク ခိမဲဆဲခု လို့ခေါ်ပါတယ်။
セク ဆိုတာကတော့ Sex၊ ကာမဆက်ဆံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးထားပြီး စိတ်ကြွနေတဲ့အခြေအနေနဲ့ ကာမဆက်ဆံခြင်းဖြင့်၊ အတောမသတ်နိုင်တဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေရရှိတာကြောင့် အသုံးပြုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
မိန်းကလေး A ရဲ့မိဘတွေဟာ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းရင်းနဲ့ ကိုယ်တိုင်လည်းကာမစိတ်ထကြွဖို့ရန် အသုံးပြုကြပါတယ်။
မိဘတွေဟာ မနက်ကနေမိုးချုပ်တဲ့အထိ နေ့တိုင်းဆေးသုံးပြီး ကာမဆက်ဆံကြပါတယ်။
မိန်းကလေး A ဟာ အဲ့ဒီလိုမိဘတွေရဲ့အပြုအမူကြောင့် အိမ်မှာမနေချင်လို့၊ ဂိမ်းစက်သေးသေးလေးကိုကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုတ်ပြီး အများပြည်သူပိုင်ပန်းခြံမှာသွားနေလေ့ရှိပါတယ်။
ညမိုးချုပ်ပြီး ဗိုက်ဆာလွန်းလို့မအောင့်နိုင်တော့တဲ့ မိန်းကလေး A ဟာ အိမ်ကိုပြန်တဲ့အခါမှာတော့ သူ့ကိုစောင့်ကြိုနေတာက မိဘတွေရဲ့ပျက်စီးနေတဲ့ပုံစံပါပဲ။
အမေဖြစ်သူက အသိစိတ်မထိန်းနိုင်ဘဲ စိတ်လွတ်နေတယ်။
အဖေဖြစ်သူက “ ဝေလငါးတစ်ကောင် တိုက်ခိုက်ဖို့လာနေပြီး！” ဆိုပြီး ထင်ယောင်ထင်မှားတွေပြောရင်း ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရမ်းနေတယ်။
အဲ့ဒီလိုမိဘတွေကို တတ်နိုင်သလောက်မမြင်ရအောင်ဆိုပြီး၊ မူလတန်းကလေးဘဝကတည်းက ကျောင်းနဲ့ရော၊အိမ်နဲ့ပါ ဝေးနိုင်သမျှဝေးအောင် ရှောင်နေပါတော့တယ်။
အလယ်တန်းကျောင်းသူဖြစ်လာပြီးမှ သူငယ်ချင်းနဲ့စီနီယာတွေရဲ့အိမ်မှာလိုက်အိပ်ခဲ့ပေမဲ့၊ သူမကိုလက်ခံပေးတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအများစုကလည်း ဘဝတူပဲ ကျောင်းပြေးတဲ့လူတွေနဲ့ ပျက်စီးနေတဲ့မိသားစုက ကလေးတွေချည်းပဲဖြစ်နေပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုထဲမှာ မိန်းကလေး A ဟာလည်း မူးယစ်ဆေးဝါးကိုမှတ်မိနေခဲ့ပါတယ်။
ဒီအပြင် မိန်းကလေး A ရဲ့အိမ်မှာတော့ အမေကမူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့်စရိုက်ပျက်ကာ ယာကူဇာအဖွဲ့ရဲ့ပိုက်ဆံလည်း သုံးမိပြီးအကြီးအကျယ်ဒုက္ခတွေရောက်..
အဖေဖြစ်သူက မိန်းမကိုထားခဲ့ပြီး ကိုရီးယားလူမျိုးမိန်းကလေးနဲ့ လက်ထပ်လိုက်ပါတယ်။
တစ်လကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ မိန်းကလေး A ရဲ့အမေကို ရဲတွေဖမ်းသွားပါတယ်။
ဒါနဲ့ပဲ မိန်းကလေး A ဟာပြန်ဖို့နေရာလည်းမရှိတော့ဘဲ၊ အသက် ၁၆ နှစ်မှာ Shinjuku ရဲ့ Kabukicho ကဘားတစ်ခုမှာအလုပ်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအသက်အရွယ်နဲ့ဒီအလုပ်လုပ်ဖို့မသင့်တော်တဲ့အတွက် လိမ်ပြီးအလုပ်ဝင်ခဲ့ပေမဲ့၊ အသက် ၁၆ နှစ်ဟာ ဘယ်လိုပဲကြည့်ကြည့် အရွယ်ရောက်သူတစ်ယောက်လို့ မခံစားရပါဘူး။
မိမိကိုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့ ယာကူဇာနဲ့တွဲလိုက်ပေမဲ့၊ အဲ့ဒီအမျိုးသားကလည်း မူးယစ်ဆေးဝါးအသုံးပြုသူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်နေပြန်တယ်။
နှိပ်စက်မှုတွေကိုကြောက်ရွံ့ရင်းနဲ့ပဲ မိန်းကလေး A ဟာ ကလေး ၃ ယောက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
“ ယာကူဇာကိုအရမ်းမုန်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ ယာကူဇာအသိုင်းအဝိုင်းထဲကနေကို ရုန်းမထွက်နိုင်ခဲ့ဘူး” ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပဲပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယတစ်ယောက် B ဆိုတဲ့မိန်းကလေး
တိုကျိုမြို့ပြင်က တာချီကာဝါမြို့ မှာမွေးဖွားလာခဲ့ပေမဲ့၊ ဖခင်ကယာကူဇာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ရာထူးကတော့ အဲ့ဒီလောက်မကြီးပေမဲ့၊ အဆုံးမှာမူးယစ်ဆေးဝါး မှောင်ခိုရောင်းချမှုကိုဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဖခင်ရဲ့အလုပ်ကို မိခင်ဖြစ်သူပါဝိုင်းကူပြီး၊ နေအိမ်မှာပေါ်တင်ပဲ ရောင်းချလာခဲ့ပါတယ်။
နှစ်ယောက်လုံးဟာ မိန်းကလေး B ရှေ့တောင်မရှောင်ဘဲ၊ မျက်စိရှေ့မှာတင် ထူးဆန်းတဲ့ဆေးတွေကို အရောင်းအဝယ်လုပ်လာရင်း၊ ဒီနေရာမှာပဲဆက်ပြီးရောင်းနေရင်တော့ ရဲတွေသတင်းရပြီးဝင်ဖမ်းနိုင်တယ် ဆိုပြီးမိဘတွေဟာ ကြောက်ရွံ့လာခဲ့တယ်။
ဒါကြောင့် စိတ်ကြွဆေးတွေကို မိန်းကလေး B ရဲ့ကျောင်းလွယ်အိတ်ထဲမှာ ဖွက်ထားခဲ့ပါတော့တယ်။
ဂျပန်မူလတန်းကလေးတွေရဲ့ ကျောင်းလွယ်အိတ်ကတော့ ဒီလိုပုံစံပါ။
ကလေးမလေးဟာ မူလတန်းအရွယ်ပဲ ရှိသေးပုံရပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကို ဒီကျောပိုးအိတ်ထဲမှာဖွက်ထားပြီး၊ ဒီကျောပိုးအိတ်ကလည်း တစ်နေကုန်မူလတန်းကျောင်းဆောင်ထဲမှာရှိနေတာကလည်း အားလုံးကထိတ်လန့်သွားစေခဲ့ပါတယ်။
ထုံးစံအတိုင်း ကလေးရှေ့မှာတင်ရောင်းဝယ်ကြပြီး၊ လူကြီးတွေဟာပျော်ပျော်နဲ့ဝယ်သွားကြပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုအခြေအနေနဲ့ ကလေးကဒီအလုပ်အပေါ်စိတ်ဝင်စားမိသွားမှာလည်း ဧကန်မလွှဲပါပဲ..
မုဆိုးနားနီးတော့မုဆိုးဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပါပဲ ကလေးမလေး B ဟာလည်း မူးယစ်ဆေးဝါးကျေးကျွန်တစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
မိဘရဲ့လုပ်ရပ်ကိုကြည့်ပြီး ကိုယ်လည်းဒီလိုမဖြစ်ချင်ဘူးလို့ တွေးနေသော်လည်း ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ပဲရောက်သွားကြတယ်….
တကယ်ကိုသနားစရာကောင်းတဲ့ ဒီမိန်းကလေးတွေကို ကယ်တင်နိုင်မယ့်နည်းလမ်း ရှိပါစေလို့ပဲဆုတောင်းမိပါတယ်..
Corona ကြောင့် Yakuza လည်းဝင်ငွေမရှိ !??
ည ၈ နာရီကနေ မနက် ၉ နာရီအထိ။ ညလုံးပေါက်ဆေးဆိုင်မှာ အရောင်းရဆုံးအရာကဆေးမဟုတ်ဘဲ…?